Safaarada Sweden ee Addis Ababa | Somaliska
Safaarada Sweden ay ku leedahay magaalada Addis Ababa ee Dalka Ethiopia ayaa ilaa bilowgii sanadkaan joojisay lacagtii fiiga ee laga qaadijiray dadka dalbanaya sharciga Sweden. Safaarada ayaa xitaa joojisay su'aalihii interviewga ee xog aruurinta ahaa. Si aan ugu kuur galo arintaan ayaa waxaan wax ka waydiiyay sargaal ka tirsan safaarada Sweden kaasoo ii sheegay in ay tani ka dambeyso sharcigii soo baxay sanadkii hore ee shuruuda baasaboorka lagu saaray Soomaalida. Mar aan su'aalay in caruurta laga qaadayo lacagta ayuu ii sheegay in uusan jecleyn in uu arintaas ka hadlo balse waxa uu ii sheegay in caruurta laga qaado fiiga maadaama DNA laga qaado asagoo intaas ku daray shuruuda baasaboorka in aysan Soomaalida keliya ahayn. Waxa u balan qaaday in uu i casuumi doono waqti aan fogeyn. Si kastaba ha ahaatee safaaradaha ayaan wax awooda meesha ku lahayn oo go'aanka dhabta ah waxa laga sugayaa maxkamada Socdaalka ama baarlamaanka Sweden. Ahmed Abdikarim Hussein (Ahmed Dhicis), Addis Ababa, Ethiopia
Safaarada Sweden ay ku leedahay magaalada Addis Ababa ee Dalka Ethiopia ayaa ilaa bilowgii sanadkaan joojisay lacagtii fiiga ee laga qaadijiray dadka dalbanaya sharciga Sweden.
Safaarada ayaa xitaa joojisay su’aalihii interviewga ee xog aruurinta ahaa. Si aan ugu kuur galo arintaan ayaa waxaan wax ka waydiiyay sargaal ka tirsan safaarada Sweden kaasoo ii sheegay in ay tani ka dambeyso sharcigii soo baxay sanadkii hore ee shuruuda baasaboorka lagu saaray Soomaalida.
Mar aan su’aalay in caruurta laga qaadayo lacagta ayuu ii sheegay in uusan jecleyn in uu arintaas ka hadlo balse waxa uu ii sheegay in caruurta laga qaado fiiga maadaama DNA laga qaado asagoo intaas ku daray shuruuda baasaboorka in aysan Soomaalida keliya ahayn.
Waxa u balan qaaday in uu i casuumi doono waqti aan fogeyn.
Si kastaba ha ahaatee safaaradaha ayaan wax awooda meesha ku lahayn oo go’aanka dhabta ah waxa laga sugayaa maxkamada Socdaalka ama baarlamaanka Sweden.
Ahmed Abdikarim Hussein (Ahmed Dhicis), Addis Ababa, Ethiopia
March 21, 2011 at 15:07
Asc walaal jimcale warkan no kala dacaday . Interviewga miya la joojiyey mise waa labilaabay. Waxan fahmi waynay wariyaha sidu wax u wada fadlan na fahansi.
Wan salamaya dhaman bahda kuxiran somaliska hadan idin faah fahiyo nuqulkan waxaa layareya dhaman sualihi lawaydinjiray dalbadaha qofka ah, tasina waxay ka dhigan tahay in la badalay qabkii hore ee loqadi jiray interviewga , hadan kajawabo dhanka DNA ga sida uu hadalka u dhigay (AMBASSADOR JENS ODLANDER) İn dhiiga DNA uu. Unoqon dono gun dacwada reraha, inkasto an war dherada inu isiyo an kubalansanahay dhamadyada asbuucan ana idinso tabindono
waxan salamayaa dhaman umada somaliyed gaar ahan bahda somaliska waxaa codsanayaa in la ii fafahiyo DNA ga laga qadayo shaqsi kasta ama dadka wax isu dhalay? mise waa sharci cusub
fadlan jawab ayan kaga fadhiyaa jmcaale
Walal wan kaga hayaa jawab midas,
sxb dadka laga qadayo waa dadka wax isku dhalay inta laogyahay waxana jira reero ila dhawra inta laogyahay oo qarna lodiray DNA qarna ay maren dhawan lkn waxan cadayn in lagarabo reraha an wax isku dhalin
Waxaan u fahmay in uu ka wado interview waa la qaadaa balse sidii hore ee dadka suaalaha badan ee ku saabsan xiriirkooda ee xaqiiqo raadiska ahaa uma waydiiyaan dadka.
Aniga xitaa si fiican uma fahmin marka waxaan ka dalbaday qoraaga in uu faahfaahin dheeri ah ii soo diro.
waxaan u fahmay inow ula jeedo su,aalaha sidi 2007.08.09.10 ka looma adkeeyo maadaama ay adkaatay isku keenida sharciga dadka saas aaan u sabab ah sida aaan u arko lkn warkaan waaga ma bislo waxaa u dhiman sanco gabal dhiman gabar lama tuso waaye muga hala soo buuxsho
DADIR yare says:
sc,salaan kadib mahadsanidiin shabakada casriga ah ee somaliska.com, sual, maxaa laga damacsan yahay arimaha qoyska aan waxba isku ama go’aan ka gaartey migrationskevert?
mahadasanid jimcaale iyo bahda shaqaaalaha kale.
March 22, 2011 at 12:24
asc dhamaantiin safaarada sweden ee dal ku taal waa gudbiye waraaqo adigoo daaqada uga dhiibaya ,wixii la soo dhaho ayey kuugu yiidhi ee jawaab ah inta badana waa kula mid wax ay ogyihiin baa iska yar taas anaa soo taabtay.